काठमाडौंमा एकैदिन ४८१ जनामा काेराेना संक्रमण, ९६ प्रतिशत स्थानीय संक्रमित — onlinedabali.com
काठमाडौंमा एकैदिन ४८१ जनामा काेराेना संक्रमण, ९६ प्रतिशत स्थानीय संक्रमित
डबली संवाददाता २०७७ भदौं १६ गते
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेश ब्रिफिङमा बोल्दै मन्त्रालयका प्रबक्ता डा. जागेश्वर गौतमले काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्लो २४ घण्टामा ४८१ जना कोरोना संक्रमित थपिएका बताएको छन् । आज काठमाडौंमा ३९३ जना, ललितपुरमा ५८ जना र भक्तपुरमा ३० जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् ।
आज देशभर थप १ हजार ६९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । हाल सम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४० हजार ५२९ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा गौतमले जनाएका छन् ।
त्यसैगरी आज थप ११ जनाको ज्यान गएको जनाएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट गुमाउने संख्या २३९ पुगेको प्रवक्ता गौतमले बताए ।
आज ७६८ जना कोरोना संक्रमण जितेर घर फर्किएको छन् । यससँगै अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या २२१७८ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै नेपालमा हाल सम्म १८११२ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । जस मभ्ये १०८३२ जना संस्थागत आइसोलेसनमा र ७२९० जना होम आइसोलेनसमा राखिएको छन् । त्यसैगरी क्वारेन्टिन्मा ७३९० जना रहेका छन् । आज १२०८८ वटा नमुना परीक्षण गरिएको छ ।
आजको मन्त्रालयको ब्रिफिङमा जनस्वास्थ्य विद डा. सुरेश तिवारीले अब नेपालमा कोभिड १९ संक्रमण समुदायको चरणमा पुगेको बताएका छन् । अहिले ९६ प्रतिशत स्थानीयमा संक्रमण भएकाले समुदाय चरणमा प्रवेश गरेको जानकारी दिएको छन् ।
त्यसैगरी नेपालमा संक्रमण सुरुवाती दिनमा विदेशबाट आएकामा मात्रै भएको भए पनि अहिले भने त्यो अवस्था नरहेको बताए। उनले समुदायमा संक्रमण फैलिसकेकाले अबको परीक्षण निकै वैज्ञानिक र लक्षित व्यक्तिलाई गर्नुपर्ने बताएका छन् ।